Baarlamaanka Puntland Xildhibaano ka tirsan oo wada Mooshin ka dhan ah Xukuumadda Gaas | WARARKA PUNTLAND
Home Wararkii Hore akhriso Baarlamaanka Puntland Xildhibaano ka tirsan oo wada Mooshin ka dhan ah Xukuumadda...
Baarlamaanka Puntland Xildhibaano ka tirsan oo wada Mooshin ka dhan ah Xukuumadda Gaas
Waxaa isa soo taraya warar si hoose uga soo baxaya qaar ka mid ah Xildhibaanada Golaha Baarlamaanka Dowladda Puntland. Warku wuxuu sheegayaa in 27 Mudane oo ka mid ah Baarlamaanka wadaan qorshe mooshin ka dhan ah Xukuumadda Madaxweyne Gaas.
Xildhibaanada Baarlamaanka Puntland ayaa waayadii dambe waday dhowr mooshin is barbar socday.
Qaar ka mid ah Mudanaayasha baarlamaanka ayaa waxay ka soo diyaariyeen Xukuumada Madaxweyne Gaas in mooshin cod ah loo qaado, inkastoo xilli hore is hor-taagay Guddomiyihii Baarlamaanka Puntland iska casilay ee Siciid Xasan Shire, waxaana halkaas ku yara damay mooshinkii socday waqtigaas oo ay 18-ka mid ah Mudanayaasha Golaha Baarlamaanka Puntland soo diyaariyeen.
Qaar ka mid ah Xildhibaanada ayaa qaba in Cameey laga soo diyaariyo Mooshin isna meesha looga tuurayo, madaama ayan wada shaqeyn karin Madaxweyne Gaas iyo Cameey.
Dooda hadda ka dhextaagan Mudanayaasha baarlamaanka ayaa ah tuhun iyo xan hoose oo u kala qeybsan Xukuumadda, kooxo mucaarad ku ah iyo kooxo la kala safan Madaxweyne Gaas iyo ku xigeenkiisa Cameey.
Wararka xaqiiqada ah ee hadda ka soo baxayaa mudanayaasha qaar ayaa sheegaya in ay wadaan mooshin xoogan oo ka dhan ah Xukuumadda hadda jirta sidii Xasaanada looga qaadi lahaa, waxaana qorshahaas wada ilaa 27 ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Puntland oo laga yaabo habeen qura in ay helaan tiro le’eg oo mowqifka Mooshanka la qaata.
Maalmo ka hor ayey aheyd markii 40 mudane soo qoreen mooshin habeen madoow xilka looga xayuubinayo Gudoomiyihii hore Baarlamaanka Siciid xasan shire waloow isagu aroortii xilkaas iska casilay inta aan Golaha ka xayuubin.
Baarlamaanka Puntland ayaa ah mid awood siayasadeed la soo baxay, taasoo ah mid aanu wax weyn ka bedeli karin gudoomiyaha Cusub ee la doortay dhowaan Axmed Cali Xaashi oo dad badan aaminsan yihiin in Madaxtooyadda Puntland ku bixisay doorashadiisa Xildhibaankiiba in la siiyey dhaqaale dhan ilaa lix kun oo doollar oo codka ay ku siinayaan Gudoomiyaha Cusub ee la doortay.
Ugu dambeyntii waxaa muuqta oo iska cad in Siyaasdda gudaha Puntland iyo tan Dowladda Federaalka Sooamaliya ay Muqdisho ka wado ay yihiin dhamaan kuwo halis ku ah Mustaqablka iyo Aayaha Siyaasadeed ee Deegaanada Puntland, taasoo siyaasiyiin badan dusha eedahan uga tuuraya Madaxda Xukuumada Puntland oo wajihi la Siyaasad muuqata oo jid cad haysata, kana turjumi karta rabitaanka shacabka Puntland.
This post has already been read 129124
Previous articleShirar Hiigsiga Wadatashiga 2016-ka oo looga doodayo Gobolka Bari iyo Karkaar maalmaha soo socda habka la qaadan karo ee doorasho 2016-ka
Next articleGuddomiyaha Jaaliyadda Reer Puntland UK ee Cariga Ingiriiska oo loo doortay Eng Mohammoud Cabdi-risaaq Barre